E-Antarctica ukuthola ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta kanjani ama-penguin | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - Miguel A. Jiménez Tenorio
Isazi sezinto eziphilayo seCalp UJosabel Benlliure uzosebenzisa uKhisimusi ezungezwe ngamaphengwini angaphezu kwezinkulungwane ezingama-40 ezivela eDeception Island, e-Antarctica, ngenhloso ethile: ukutadisha imiphumela ukushintsha kwesimo sezulu okuba nayo kulezi zilwane ezinhle, ezisengozini yokuncibilika namazinga okushisa athanda ukuba phezulu naphezulu.
Futhi uzokwenza ngaphakathi kwephrojekthi ye »Pingufor» ukuphenya izinhlobo ezintathu zezinto eziphilayo: I-Pygoscelis antarctica (i-chinstrap penguin), I-Pygoscelis adeliae (adelia) kanye I-Pygoscelis papua (Papua), njengoba kubhekwa "njengonogada bezempilo" bemvelo abahlala kuyo.
Njengoba izinga lokushisa elijwayelekile le-Antarctica landa, kwenzeka izinguquko ezinkulu. Okwamanje, abacwaningi sebethole ubukhona be- ukwehla kwe-chinstrap kanye ne-adélie penguin populations ngenxa yokwehla kwabantu be-krill, okuwukudla okuyinhloko kwama-penguin.
Ngakolunye uhlangothi, futhi ngokufana, bakuqinisekisile lokho imikhaza ifinyelele e-Antarctica. Lezi zinambuzane zingadlulisa izifo ezintsha futhi, ngakho-ke, zibeka engcupheni izimpilo zezinhlobo eziningi.
Abaphenyi be- »Pingufor» bacwaninga nge-penguin yokuzalanisa ikoloni eyakhiwe ngamabhangqa angabalelwa ezinkulungwaneni ezingama-20. Ososayensi abathathu bezinto eziphilayo abaphethe ukuqapha kufanele bakhethe izidleke ezingama-200 ukumaka amachwane futhi, ngaphezu kwalokho, bafaka imishini yokudlulisela kubantu abadala. Ngale ndlela, bangalazi ibanga elihanjwa ngabazali abahamba befuna ukudla nsuku zonke.
Uphenyo luzokwenzeka kusuka ngoDisemba 2017 kuya kuNdasa 2018 phakathi kwesizinda sikaGabriel de Castilla kanye nepenguin koloni, okuqhele cishe ngamahora amabili ukusuka lapho. KuBenlliure, lo ngumkhankaso wesihlanu we-Antarctic.
Ngokungangabazeki, lapho sazi ngokwengeziwe ngemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu emhlabeni kanye nakubantu abahlala kuwo, kulapho kuzodingeka khona amathuba okuzivumelanisa nakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » E-Antarctica ukuthola ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta kanjani ama-penguin